Uhlu lwamagama ngegama Anusha
Amagama amahle kakhulu, amagama athandwa kakhulu okugcina ngegama Anusha.
Amagama amaningi avamile ngegama Anusha
Wonke amagama egama Anusha
AmaSurnames namagama abantu abanegama Anusha
Okuningi mayelana negama lokuqala Anusha
Anusha kusho igama
Iyini Anusha isho ukuthini? Okusho igama Anusha.
Anusha ukuhambelana nama-surname
Anusha ukuhlolwa kokuhambelana namazwi.
Anusha ukuhambisana namanye amagama
Anusha ukuhlolwa kokuhambisana namanye amagama.